Bit By Bit - Mass ngokubambisana - 5.5.6 Final design iseluleko
Ngaphezu kwalezi zimiso 5 design jikelele, ngingathanda ukunikela ezinye izingcezu ezimbili iseluleko. Okokuqala, umnyakazo osheshayo ongase uhlangabezane nazo wena lapho phakamisa mass kusebenzisana phrojekthi "Akekho ayeyohlanganyela." Yebo, kungase kube yiqiniso. Empeleni, ukuntuleka iqhaza ingozi enkulu mass ukubambisana amaphrojekthi babhekene. Nokho, lokhu bayihlabe ngokuvamile kuphakama kusukela ukucabanga ngesimo ngendlela engafanele. Abantu abaningi baqale enabo kutfola: "Ngimatasa; Bengingeke ngikwenze lokho. Futhi, angazi ubani ukuthi babezokwenza lokho. Ngakho, akekho babezokwenza lokho. "Nokho, kunokuba uthome wena kanye nisebenzela, kufanele uqale nge lonke sabantu exhunywe kwi-Inthanethi kanye nomsebenzi in. Uma kuphela 1-in-a-million walaba bantu iqhaza, ke project wakho ingaba impumelelo. Kodwa, uma nje 1-in-a-abantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu iqhaza, khona-ke project yakho cishe ibe ukwehluleka. Njengoba umuzwa wethu Akukuhle at ukuhlukanisa phakathi elilodwa a million kanti eyodwa-in-a billion, kumele sivume ukuthi kunzima kakhulu ukwazi uma amaphrojekthi ngeke ukhiqize iqhaza eyanele.
Ukuze wenze lokhu kancane more ukhonkolo, ake ubuyele Galaxy Zoo, umuntu kathisha isayensi yezinkanyezi project esisanda kuxoxa ngazo kulesi sahluko. Cabanga nje Kevin Schawinski Chris Linton, izazi zezinkanyezi ezimbili ehlezi endaweni yokucima Oxford ukucabanga mayelana Galaxy Zoo. Babengasoze ukuyichaza futhi singalokothi babekwazi ukuyichaza-ukuthi Aida Berges-ukuhlala-at-ekhaya umama ka 2 ohlala e Puerto Rico-uyogcina ekulinganisweni amakhulukhulu zemithala ngesonto (Masters 2009) . Noma, cabanga ngendaba David Baker, lo ezinto abasebenza Seattle asathuthuka Foldit. Ayengasoze Kulindeleke ukuthi othile evela McKinney, Texas ogama lakhe Scott "Boots" Zaccanelli, owayesebenza emini kakhulu wokuthengela efemini valve, uzochitha kusihlwa zakhe alo amaprotheni, ekugcineni ephakama inombolo 6 simo on Foldit, nokuthi Zaccaenlli kwakuyoba, ngokusebenzisa umdlalo, uhambise design okufana more esitebeleni of fibronectin ukuthi Baker neqembu lakhe yathola othembisayo ngakho banquma ukuhlala synthesize ke lab yabo (Hand 2010) . Yiqiniso, Aida Berges noScott Zaccanelli kukhona atypical, kodwa yileyo amandla Internet: njengoba kunezigidigidi zabantu, kuba esivamile ukuthola atypical.
Okwesibili, okhiphé lesi nobunzima nge ukubikezela iqhaza, ngithanda ukukhumbuza wena ukuthi udala mass ukusebenzisana Iphrojekthi yingozi. Ungase utshele ukutshala okuningi umzamo ukwakha isimiso sokuthi akekho ofuna ukuyisebenzisa. Ngokwesibonelo, u-Edward Castronova-umcwaningi okuholela emkhakheni wezomnotho of yasemoyeni ehlome sinikeziwe $ 250.000 kusukela MacArthur Foundation, futhi esizwa yiqembu Onjiniyela-sasichitha cishe iminyaka emibili bezama ukwakha izwe virtual ngaphakathi elithize abengumsunguli babekwazi ukuhlola kwezomnotho. Ekugcineni, wonke umzamo alizange; akekho wayefuna ukusebenzisa izwe Castonova virtual (Baker 2008) .
Njengoba sazi ukungaqiniseki mayelana iqhaza, okuyinto okunzima ukuqeda, mina basikisela ukuthi uzama ukusebenzisa mafutha amasu ekuqaleni-up (Blank 2013) : ukwakha prototypes elula ngokusebenzisa off-the-eshalofini software futhi ubone uma ungakwazi khombisa ukusebenza ngaphambi kokuba utshale eziningi yentuthuko software siko. Ngamanye amazwi, uma ukuqala ukuhlolwa umshayeli, iphrojekthi yakho ngeke-futhi akufanele-abukeka ngendlela ophucuziwe njengoba Galaxy Zoo noma eBird. Lezi zinhlelo, njengoba manje, umphumela kweminyaka zizama amaqembu ezinkulu. Uma iphrojekthi yakho ngeke aphumelele-futhi lokho kuyinto real kungenzeka-ke ukuthi ufuna ukuba bahluleke fast.